WINDOWS 10 CUSBOONAYSII KB5012599, KB5012591, KB5012647 SOO DEJINTA OFFLINE - WINDOWS 10 CUSBOONEYSII
Windows 10 cusboonaysii KB5012599, KB5012591, KB5012647 soo dejinta offline
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay Abriil 17, 2022
Maanta qayb ka mid ah Abriil 2022 balastar Talaado Cusbooneysii Microsoft waxay sii deysay cusboonaysiin cusub oo amniga ah dhammaan aaladaha la taageeray oo ay ku jiraan Windows 10 Cumulative Update KB5012599 (OS Builds 19042.1645, 19043.1645, iyo 19044.1645) ee ugu dambeeyay Windows 10 nooca 21H2, 21H2.1 iyo 20H2 Waxaa jira KB5012591 cusub (OS Build 18363.2212) oo la heli karoloogu talagalay Windows 10 nooca 1909, KB5012647 (OS Build 17763.2803) ee Oktoobar 2018 nooca cusboonaysiinta 1809, KB5011495 (OS Build 14393.5066) ee qalabka ku shaqeeya nooca 1607.
Sida caadiga ah, Patch Tuesday waxay keentaa horumarka amniga iyo kuwa aan sugnayn labadaba, markaa isticmaalayaasha waxaa lagula talinayaa inay ku rakibaan sida ugu dhakhsaha badan. Intaa waxaa dheer, Microsoft ayaa sidoo kale soo diri doonta cusboonaysiinta amniga ee Windows 8.1 iyo 7, iyo dayacanka waxaa lagu xalin doonaa badeecooyinka kale, oo uu ku jiro Microsoft Office.
Waxaa ku shaqeeya 10 maamulaha OpenWeb oo abuuraya intarneet ka caafimaad qaba, Elon Musk 'wuxuu u dhaqmayaa sida Troll' La Wadaag Marka xigta Joog
Xagga amniga, Cusboonaysiintan isugeynta ah waxay caadi ahaan keentaa hagaajinta Windows Shell, Xakamaynta Koontada Isticmaalaha Windows, Windows Kernel, Internet Explorer, iyo Microsoft Edge Legacy. Dhanka hagaajinta aan amniga ahayn ee cusbooneysiintan, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa la socda hagaajinta cayayaanka ee loogu talagalay Windows 10 nooca ay tahay in lagu rakibo.
Sida shirkaddu tahay, cusboonaysiinta Patch-kan KB5012599, KB5012591, KB5012647 kuma jiraan wax sifooyin cusub ah Taa bedelkeeda, diiradda ayaa saaran amniga, hagaajinta la isku halleyn karo, iyo hagaajinta guud ahaan guddiga. La hagaajiyay arrinta dib u dejinta Windows taasoo keeni karta xogta hadhaaga qaabaynta qaarkood, oo ay ku jiraan cusboonaysiinta ikhtiyaariga ah iyo cusboonaysiinta amniga ee sugaysa, iyo in ka badan.Waxaad akhrin kartaa tafaasiisha isbeddelladan (Hagaajinta iyo hagaajinta). halkan .
Windows 10 cusboonaysiinta KB5012599, KB5012591, iyo KB5012647 ayaa laga heli karaa windows update, taas oo macnaheedu yahay isticmaalayaasha dhabta ah ee ku xidhan serverka Microsoft inay si toos ah u rakibi doonaan cusboonaysiinta. Waxaad ku hubin kartaa in cusboonaysiinta ugu dambeysay la rakibay iyo in kale adiga oo isticmaalaya Guuleyste amar ku saabsan raadinta menu bilowga.
Ama waxaad gacanta ku dhejin kartaa balastar-ka adigoo raacaya tillaabooyinka hoose.
Fur abka Settings adigoo isticmaalaya Windows + I kiiboodhka gaaban
Guji Cusbooneysii & Amniga kadibna Windows Update.
Ku dhufo batoonka cusboonaysiinta si aad ugu oggolaato soo dejinta cusboonaysiinta Windows ee server-ka Microsoft.
Sidoo kale, waxaad ka soo dejisan kartaa xirmada keligood ah blog-ka buugaagta Microsoft ama waxaad isticmaali kartaa xiriirinta hoose si aad u cusboonaysiiso kombuyuutar badan oo aad u badbaadiso bandwidth.
Soo deji Windows 10 Updates
Xidhiidhada soo dejinta tooska ah ee Windows 10 KB5012599: 64-bit iyo 32-bit (x86) .
Windows 10 Dhis 18363.2212
Windows 10 Dhis 17763.2803
Sidoo kale, waxaad kala soo bixi kartaa tan ugu dambeysay Windows 10 faylka ISO ee server-ka Microsoft halkan . Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah markaad rakibayso cusbooneysiintan hubi sida loo hagaajiyo Windows 10 Cusbooneysii dhibaatooyinka rakibaadda .
Sida dib loogu rogo windows 10 Version 2004 May 2020 update
Sida loo hagaajiyo DISM Khaladaadka Fashilmay ee Windows 10 si wax ku ool ah
La xaliyay: Windows 10 Cusbooneysii KB5010342 wuu ku guuldareystay inuu ku rakibo kombuyuutarrada qaarkood